Uwebhola ucela uxhaso | News24
Uwebhola ucela uxhaso
Izithombe: zithunyelwe Umdlali webhola lezi nyawo uGoodwill Bhengu ofake ijezi elikuhlaza (blue) enza adume ngazo enkundleni yezemidlalo.
UMFUNDI wase-Kloof High School uGoodwill Bhengu oneminyaka eyi-15 ubudala odlala ibhola lezinyawo elinenkosi phakathi, uthe uthando lwakhe lokudlala ibhola lezinyawo lwaqala esawumfanyana oneminyaka eyisithupha.
UGoodwill ozinze e-Kloof uthe ibhola liyikho konke kuye.
Uthe: “Ibhola ngilithanda ngakho konke enginakho futhi liyikho konke kimina. Esikhathini esiningi uma nginezinkinga noma uma ngiphatheke kabi emoyeni ngivele ngiye enkundleni yemidlalo ngizidlalele ibhola. Ngokwenza lokhu ngivele ngizwe sengathi zonke izinkinga zami zishabalele,” kusho yena.
Uthe ngesikhathi esafuda amabanga aphansi waqokwa ukudlalela iqembu lesikole, wayethola izindondo nemiklomelo kuyona yonke imidlalo. Uthe: “Ibhola lezi nyawo ngalidlala ngisfunda amabanga aphansi. Lapho ngangine minyaka eyisithupha. Ngesikhathi ngifunda u-grade-3 ngathola indondo yokuba ngumdlali wonyaka, futhi lendondo ngangiyithola njalo ngonyaka. Iphupho lami lwafezeka ngesikhathi ngenza u-grade 7, ngiqokelwa ukudlalela iqembu lesifunda saKwaZulu-Natal futhi nakhona ngathola indondo yokuba ngumdlali wekhethelo. Ngonyaka odlule nakuwo lonyaka ngiphinde ngaqokelwa ukudlalela lesifunda.”
Uqhube wathi eminyakeni emihlanu ezayo uzibona enza izifundo eziphathelene nezemidlalo (Sport Management). Uthe: “Ngizibona ngiphothula izifundo zami zika matikuletsheni bese ngenza izifundo zezemidlalo enyuvesi. Ngiyafisa ukuthi uma sengiqede ngezifundo zami enyuvesi ngidlalele iqembu elikhulu futhi elidumile. Eminye imidlalo engiyithandayo yile eyaziwa ngokuthi ama-Athletics nebhola lombhoxo”
Uthe njengoba izikole zizovalwa ufisa ukuya emidlalweni ezobe ise-Gauteng njengoba eyilungu labadlali baKwaZulu-Natal abaneminyaka eyi-15 ubudala.
Uthe uhambo lwakhe luzofeka uma nje ekwazi ukukhokha imali edingakalayo kulolelu hambo.
“Kulama holide okuvalwa kwezikole kuzobe kune-tournament eGauteng. Lapho kuzo qhudelana izifunda ezehlukahlukene. Uhambo lwami luzofezeka uma nje ngingakwazi ukuqedela imali ekhokhwayo eqenjini. Ngiyafisa ukumela isifunda sami kulemidlalo ezoba se-Gauteng,” kusho uGoodwill.
UGoodwill uyale abafana abanothando lokudlala ibhola lezi nyawo wathi: “Uma umuntu ethanda ukudlala ibhola lezi nyawo njengo chwephesh, okokuqala amele akwenze wukuthi ahloniphe futhi azithobe ngoba lokho kukhombisa ukuthi uphuma emndenini onjani nokuthi abantu bazokuhlonipha uma nawe uba hlonipha. Umqeqeshi wami uMnuz Lewis Donnelly, uhlezi esiyala ethi uma udlala ibhola kumele ulidlale ngobuhlakani. Wathi kumele uzikhuphule emdlalweni yakho noma ngabe umngakanani ngokweminyaka. Mina ngihlezi ngizigqugquzela ngokuthi kumele ngihlezi ngiziqeqesha ukuze ngingenzi ngendlela engalungile uma sengidlala. Ibhola kimina alisiwo nje umdlalo, liwumuzwa engiwuzwa ngaphakathi, liyaphila kimina. Ngisebenze kanzima ukuba la engikhona namuhla,” kusho yena.
UNkk Janet Brodey ongumkhangisi wase-Kloof High School uthe: “UGoodwill uyinsizwa ezithobile futhi eyisibonelo esihle esingumgqugquzeli kwabanye abafundi. Ungumfundi ogqoka umfaniswano wakhe ngokuziqhenya futhi ungumfundi ohlale emamatheka ngaso sonke isikhathi. Singabase-Kloof High School siyaziqhenya ngaye futhi singathokoza uma kungaba khona izinkampani, osomabhizinisi nomphakathi ongamxhasa ngohambo lwakhe oluya eGauteng kwi-tournament yebhola njengoba engenawo amandla okuqedelela imali yohambo,” kusho uNkk Brodey.
Uma ukhona othanda ukuxhasa uGoodwill Bhengu ngohambo lwakhe oluzobe luse eGauteng angashayela i-Kloof High school nombolweni ethi: 031 764 0451